Christmas Gifts Archives - Best Christmas Izipho Ideas
EtiMnga 2, 2016 xa StellaMarice Leave a Comment
Best Christmas Izipho Ideas:le iKrismesi, yokubhiyoza lemibhiyozo ngaphandle ninikela Best Christmas izipho ngezimvo ubathandayo isenokungabi eyona ngokuqinisekileyo. Siye thaca uluhlu zibabalo zilungileyo Christmas 2016, Yiya intloko uze Khetha enye okanye nangaphezulu ukuze abahlobo bakho,umama, utata, umyeni, awayethandana, nentombazana kunye nosapho nje ukukhankanya ezimbalwa.
kuba christmas izipho ngezimvo nomfana,we uyichole izipho eziya kusimangalise abo bafumana loo nto. Ukuba awukwazi kwenza ekhaya, andathumela uthando lwakho isipho ukuba ibe yinto ixesha elide. Ikrismesi emnandi!
1) Jaybird Wireless Bluetooth Headset X2 Sport (Best Christmas Izipho Ideas)
Jaybird Bluetooth Iseti yentloko :Best Christmas Izipho Ideas 2016
kuba Christmas izipho izimvo zakhe,you can send your loved one this X2 Jaybird Wireless Bluetooth headset.It is a beautifully designed sports headset for hands-free enthusiasts. Isebenza ukukunika ophezulu audio quality via Bluetooth, ikakhulu umculo tsiba-free ngaphandle. Ngayo ukuhlala ukuya 8 hours long playing music as well as making and receiving calls, apho unako khangela usebenzisa ulawulo ekude. Le iseti equka balinqabisa phezu / phantsi indlebe iinketho qete kwaye iza ukubila siqinisekiso ubungqina ngayo ebomini. Jaybird inika kakhulu lwezincedisi nezi iiheadphone, afana nechiza ezingenamaphiko indlebe Secure-Fit, ezibiza intambo kunye intambo zolawulo umboniso, ezemidlalo silicone ukukhuhlana-kufanelekile yokuthwala ingxowa, Comply premium sports memory foam for ear plugs and silicone earbuds.
Samsung Gear Fit SmartWatch: Best Christmas Izipho Ideas 2016
kuba Christmas izipho ngezimvo nomfana,the SmartWatch Samsung Gear Fit is a 24/7 igajethi Yam kuba nobudlamkileyo. It comes with always-on activities to follow any track of your activity which can last all day. Wesinxibo phezu zokuhamba yakho elimnandi yaye kwangaxeshanye simahla nayiphi na uhlobo umonakalo njengoko iza nothuli kunye namanzi ukhuseleko (IP67). Indihlala kakuhle, esomeleleyo kwaye ukukhanya. Le iwotshi smart iquka umboniso egosogoso super AMOLED. Kukho fitness lunempembelelo yobuqu oluza woluvo izinga intliziyo. Le iwotshi smart ikakhulu imisebenzi ukukunika iingcebiso okwixesha-lokwenene, inkxaso kunye kukushukumisela ukuba ekufezekiseni iinjongo zakho fitness. Ikuvumela ukuba ukulawula ngokulula nemisebenzi esisiseko efana impendulo ekhawulezileyo imiyalezo, kubiza imiyalezo yokugxothwa alarms.
3) weThayile (Gen 2) – mfono Finder. Finder key. item Finder
Tegel (Gen 2) – mfono Finder. Finder key. item Finder: Best Christmas Izipho Ideas 2016
Best Christmas Izipho Ideas :Tile is a Bluetooth-tracker and a user-friendly application that helps you find important things that you can not lose easily, ezifana ifowuni, izitshixo, isipaji, umthwalo, amacwecwe, iikhamera, etc. Le app wenza umsebenzi wayo umcimbi lemizuzwana . Konke ekufuneka uyenze ukulungisa ithayile ukuya kwenye into yakho uze ukunika kunye nesandi, apha emehlweni indawo yokugqibela eyaziwayo kwimephu. You can also indicate “izinto ezilahlekileyo kwi app” kwaye bafumana isilumkiso ukuba umba sifunyenwe. kunye weThayile, ke likuvumela ukuba wenze ezilahlekileyo ifowuni yakho khonkcweni, nokuba layo cwaka. Oko ixesha elide kwaye iza evaliweyo, amanzi-resistant kwimeko, ukhuselo kuba ngosuku imbi ngemvula. Ibonisa izithethi ezincinane ezibonelela 90 isandi cibheli. Oku kwenza oluvakalayo isilumkiso, nokuba xa amagumbi ezimbalwa okanye ubekwe phantsi kwezinye imfumba yezinto.
4) Jackery Giant + USB Dual Portable Battery setshaja
Jackery Giant + USB Dual Portable Battery setshaja: Best Christmas Izipho Ideas 2016
Best Christmas Izipho Ideas: Ukuba kuhambo kokubhabha, Uhambo lwendlela, okanye nayiphi na indawo apho udinga isixhobo sakho umthwalo elide, ngoko Jackery Giant + kufuneka umsindisi wakho elifanelekileyo. Nto inkulu umthamo sisitya ephathwayo ehlabathini nebhetri zangaphandle. Oko ke umthamo ophezulu kakhulu kwitshaja ephathwayo equka mazibuko mabini USB kwizixhobo ezininzi ukuba abize ngaxeshanye. Ubuchwepheshe isebenzisa zeBakala A Li-Ion technology ngePolymer Panasonic ngayo, itswale Kuthatha ngaphezulu 500 amaxesha. Kuye etshajekayo umthamo 12,000 mAh. Oku ngokungavuzi, lightweight and comes in different colors.This gadget could be suitable for christmas izipho ngezimvo isithandwa
5) FiftyThree Digital Stylus(Best Christmas Izipho Ideas)
Ipensile by FiftyThree Digital Stylus for iPad, iPad Pro kwaye iPhone
Christmas izipho ngezimvo indoda:FiftyThree Ipensile yinto ngosiba yenzelwe ezintsha ukuba iqhagamshelana iPad and iPhone izixhobo. Kwakhona wenza ukuba iphepha yi FiftyThree, lokuyivelisa, ibhodi engobozini, meyile, SketchBook mfono, kunye nabanye. The ideal surface pressure is the unique point of the pencil which is formed so as to create the exclusive settings that provide the lines of different sizes. Ibonisa indlela yokucima eyakhelwe-ngaphakathi ekuvumela ukuba usebenzise ngayo nje flip kude. Usebenzisa umnwe wakho, uyakwazi mpuluswa ubukhali lidibanise imibala kwiphepha. Uyakwazi ubeke isandla sakho phezu kwikhusi kunye ukuqalisa ukubhala naluphi engile, ngaphandle ufakelo okanye sandi. Ivela kunye etshajekayo USB ibhetri, incam extra, irula extra kunye snap.This nemagnethi kungaba oyinto Christmas gifts ideas for husband
6) Jam HX-P930 Trance plus Wireless uSomlomo Light Bonisa
Jam HX-P930 Trance Plus Wireless uSomlomo Light Bonisa
Phendula iminxeba yakho sethongweni wakho kunye Wireless Light Bonisa uSomlomo kunye umsebenzi wefowuni ngqo, ngokuqhagamshela kwizazinzulu ukuya isixhobo seBluetooth kuluhlu unyawo-30. Oku etshajekayo kwaye ibonelela ukuya 10 iiyure lokudlala xa iingxelo 3 iiyure. Kukho Ukukhanya Bonisa ukhetho ukuze ukhethe Ngqamanisa 36 iinkqubo iqela ukukhanya LED umculo wakho. Kuye ilizwi inomsebenzisi olungele ukuba umsebenzi wayo njengoko yokudibanisa, tshintshela, etc. Yinto isixhobo ilungiselelwe ukusetyenziswa kwindlela yiyo isakhiwo sangaphandle yesithethi imitha ukhuseleko zerabha. JAM Trance Plus is durable and very portable.This can be a perfect match for christmas gifts ideas for your sister.
7) iHome iBN43BC Bluetooth kwestereo
iHome iBN43BC Bluetooth kwestereo: Best Christmas Izipho Ideas 2016
Ukudibanisa isixhobo seBluetooth yakho ehambelanayo iBN43BC kunye yostrimisho wireless umculo yedijithali. Stereo iHome iBN43BC Bluetooth yinkqubo audio Nightstand yenzelwe ngokupheleleyo audio kwizinga eliphezulu. Ivela zithethi ezimbini isandi ecacileyo. Ungacwangcisa audio yostrimisho lwe alarms kunye nesi sixhobo ukuba silele nokuba asilele. Inamalungiselelo radio sestiriyo FM ne audio premium kunye kathathu -nokulungalungiswa, imali kunye bass ulawulo. Ungadibanisa sestiriyo iHome iBN43BC Bluetooth kunye kwisixhobo iteknoloji NFC. Unako iminxeba ngokuselubala izandla-free kunye nemisebenzi wefowuni echo. Unako kwakhona izixhobo ukuba awahambelani ngoncedo igalelo abangabancedani ukudibanisa Bluetooth. Kuye izibuko USB ukuba unokubiza lula mobile xa idlala.
8) Kindle(Best Christmas Izipho Ideas)
Kindle 6: Best Christmas Izipho Ideas 2016
Christmas izipho ngezimvo umama:Akanakukutshisa zonke-olutsha 6 “iza umboniso Izilungiseleli nomthungo leyo Ophalaza kwilitha okubangelwa lilanga kwaye yenza kube lula ukufunda phambi kwamehlo enu. You can charge it once and use it for weeks as it has a high lifespan battery. It is lighter than a paperback and can store thousands of books.This device can be a perfect match for Christmas gifts ideas for mom
9) Blu Studio Selfie – efowuni
Blu Studio Selfie efowuni: Best Christmas Izipho Ideas 2016
Best izipho Christmas phantsi 20:Blu Studio-Selfie efowuni na SIM efowuni ezimbini kunye Android 5.1 Lollipop kunye neenkcukacha ezininzi enomtsalane. Le fowuni GSM awatshixwanga. Oku zazi- 1.3 GHz Quad Core Mediatek 6580 wegama nge ARM Mali-400 GPU. Ukwanalo ne-5-intshi IPS uboniso, 5-megapixel auto-kugxininisa camera eziziiprayimari flash LED nakujoliso loncamathiselo 5 megapixel camera yesibini emva LED flash. Le fowuni mayixhotyiswe Blu Touch Final Software. Kuyinto HSPA 4G + (850/1700/1900/2100), GSM quad-band smartphone.This can be great for ezona zipho christmas phantsi 20
10) Umhlathi UP3 Heart Rate, umsebenzi + Sleep Tracker, Ruby Cross (Bomvu)
Umhlathi UP3 ngokuthi Pulse: Best Christmas Izipho Ideas 2016
izibini Christmas izimvo isipho atshate:Iliso impilo ngentliziyo yakho yonke imini kunye UP3 ngokuthi lomhlathi. Kwakhona esebenzayo ubuthongo kwaye umsebenzi tracker, umkhondo ulawulo elithe wakho kunye okufunwa utshise suku ngalunye. Ungafumana inkxaso eyaneleyo ukusuka Smart Coach ukwenza ukhetho sempilweni ngosuku ngalunye nenkuthazo ufuna ukufikelela usukelo lwakho fitness. Funda ukuyazi malunga nomgangatho ebuthongweni bakho njengoko Advanced Ukulala Tracks ubuthongo oluchanileyo lwalukumanqanaba REM, Ukukhanya Enzulu. band yakho ibhaqe ngokuzenzekelayo xa usiya kulala. Kukho Alarm Smart apho cwaka uvusa nani ngelo xesha kumjikelo yakho ubuthongo. Kuye ubomi bebhetri ye 7 iintsuku.
Ngoko ke yintoni ofuna Nosondeza njengesipho ubathandayo le Krismesi? ukwabelana ngezimvo zakho izimvo. Kwakhona hlola ezi zintlu ngezantsi yendawo lula kunye ngaphezulu best Christmas izipho izimvo.
izibini christmas izimvo isipho atshate
christmas izipho ngezimvo nomfana
christmas izipho ngezimvo umama
christmas izipho izimvo zakhe
christmas izipho ngezimvo indoda
Filed Under: christmas Izipho Tagged With: ezona zipho christmas izimvo, ezona zipho christmas phantsi 20, ezona zipho christmas phantsi 50, christmas gift ideas 12 year old boy, christmas gift ideas 15 year old boy, christmas gift ideas 7 year old boy, christmas gift ideas 8 year old boy, izibini christmas izimvo isipho atshate, christmas gift ideas on a budget, christmas gift ideas tweens, christmas gifts ideas diy, christmas izipho ngezimvo nomfana, christmas izipho izimvo zakhe, christmas izipho ngezimvo indoda, christmas izipho ngezimvo umama, christmas gifts ideas homemade, christmas gifts ideas pinterest, christmas gifts ideas to make
Yintoni Ukuze Fumana uTata Yakho iKrismesi(Izipho zeKrismesi utata)
EyeNkanga 6, 2016 xa StellaMarice Leave a Comment
Yintoni Ukuze Fumana uTata Yakho iKrismesi (Izipho zeKrismesi utata):Andazi ukuba yintoni na ukuba utata wakho lweKrismesi 2016? Apha, Siza kukunceda ukuba ukhethe isipho esigqibeleleyo ukuba utata wakho.
Yintoni Ukuze Fumana uTata Yakho iKrismesi:Krisimesi yenye iziganeko inkulu ibhiyozelwa kwihlabathi yaye apho wonke umntu ukhangela phambili. Yinto okwephanyazo ogqibeleleyo abantu ukuba ukubethelela uthando lwabo njengabazali zabo kunye nabanye abantu ebalulekileyo kubomi babo ngokubanika ngezipho. Njengoko kukho ezininzi izinto isipho kwimarike, kunokuba nzima ukuba umntu ukcola isipho elifanelekileyo lokuba utata. Ukuba ubhidwa into ukunika utata wakho ngeli ixesha leKhrismesi, siza kukunceda ukuba ukhethe isipho utata wakho uya Yayixatyisiwe. Ngezantsi kukho izinto isipho ezahlukeneyo izinto ezahlukeneyo.
Page Iziqulatho (Yintoni Ukuze Fumana uTata Yakho iKrismesi)
1 Yintoni Ukuze Fumana uTata Yakho iKrismesi 2016
3 II.Exercise ibathwana
4 III.For Tech ibathwana
5 IV.For le Debonair kunye nokuphala
6 V.For bhanya Abathandi
9 VIII.For ngobungcibi nokupeyinta ongxolayo
10 IX. Kuba Specialists DIY
Yintoni Ukuze Fumana uTata Yakho iKrismesi 2016
I.For shutterbugs (Yintoni Ukuze Fumana uTata Yakho iKrismesi)
1.Canin EF 50mm f / 1.8 II yekhamera
I-50mm zihlalutywe umgangatho unika iifoto ezigqwesileyo kwaye lifelike kunye badubule zendalo-ekhangela. Khawuyisondeze loo 2.7 intshi zihlalutywe kunye yoyaka notata wakho kwaye ukuba wenza 2014 ixesha leKhrismesi lekiyo. (Iinkcukacha ...)
2.Canon PowerShot SX510 HS 12.1 MP nenjongo Kamera
Mayixhotyiswe angle ngokubanzi 24mm zihlalutywe nenamandla 30x nkulu enombala, Canon PowerShot SX510 HS nonako imifanekiso yokufakwa bevela kude kude. Ekubeni le khamera ngesandla, utata wakho uya kuba nakho ukufaka yonke into umdla size sifumane umfanekiso ogqibeleleyo kubo. (Iinkcukacha ...)
3.SanDisk Extreme Pro 64GB SDXC UHS-1 Isantya Class 3 (U3) kunye ukukhawulezisa ukuba 95MB / s & 4K HD-Ready Ultra, USatyo-Ezamahala Packaging SDSDXPA-064G-AFFP
Yenziwe ngeteknoloji entsha ixesha, oku SanDisk SDSDXPA-064G-AFFP ayithimbe Full HD yokuzonwabisa. Lixhotyiswe kuhambele ulungiso lwemposiso ikhowudi injini ukuze kuphuculwe ukuthembeka khadi kwakunye ukuthembeka kwedata ngokubanzi ngexesha ukufunda nokubhala. Oku ngokuqinisekileyo omnye izinto ezintle isipho ukunikela utata shutterbug ngeli Krismesi . (Iinkcukacha ...)
(Yintoni Ukuze Fumana uTata Yakho iKrismesi)
4.iibhayisekile backed 2014 Sorrento Mountain Bike kunye 26-Inch Wheels
Ngokuqinileyo wadala kwaye axhotyiswe shaman Altus 7spd ngasemva derailleur, 26-amavili intshi, 60mm ezinika ukunqunyanyiswa ifolokhwe, butted 60061-T6 aluminiyam Sorrento MTN / ifreyim Path, le bhayisekile ntaba iya kwenza isipho esigqibeleleyo ukuba utata wakho le Krismesi. (Iinkcukacha ...)
5.Bowflex SelectTech -nokulungalungiswa Bench Series 5.1
Kunyaka-30 isakhelo isiqiniselo, isiqiniselo ngonyaka entofontofo, kwizikhundla ezintandathu ezahlukeneyo isicwangciso nomlenze osusekayo wambamba-phantsi, lo mzekelo, iijaji -nokulungalungiswa kuya kukunceda utata wakho ukuphumeza injongo yakhe fitness, ukwakha yokuma umona kwaye ingawona esebenzayo yaye besempilweni. Uya kuba umntwana Inomtsalane kayise ukuba ufumana besi situlo -nokuhlengahlengiswa kuye. (Iinkcukacha ...)
6.Bowflex SelectTech 1090 Dumbbell -nokuhlengahlengiswa (enye)
Ngesi Dumbbell wenza ukwenza imisebenzi dumbbells ezininzi, utata wakho uya kuba nako ukuhlala esebenzayo yonke imihla. Ubunzima unako kuhlenga 5 kunoba iponti ukusuka lokuqala 10 eemina ukuya 90 iikhilogram nje ziqiqeka kwe socofo. (Iinkcukacha ...)
7.CW-X Conditioning Nxiba Okwamadoda 3/4 Stabilyx Tights
Kunye nezinto nomgangatho, le ngokuqinileyo inika inkxaso web ezingcono nokuphungulwa wentshukumo kwezihlunu, inkxaso uyabangcungcuthekisa kwedolo undoqo umzimba. Uya kwenza isipho usifanele umthambo umfana othanda utata. (Iinkcukacha ...)
8.Salomon vavanuna lava Speedcross 3 Trail Running Shoe
Olu luphawu aphilileyo yezihlangu ukuba wonke umsebenzi Buff utata uya kuyixabisa. Oku zazi- contagrip outsole ebusika-olulungilyo, yerabha kuphela, Inaliti-ukubunjwa uEva midsole, QuickLace inkqubo ngentsontelo epokothweni. Sihlangu aphilileyo yenziwe kunye eyenziweyo nenethi eziphathekayo. (Iinkcukacha ...).
Ndiqinisekile oku ukhetho entle kakhulu ukuba nangoku awuyazi into ukufumana utata wakho lweKrismesi.
9.Takara Giyama Flat Bar Keangkuhan Bike
Ngumboniso esecaleni intsila iziqhoboshi zirhuqa ngaphambili nangesemva, ngentsimbi handcrafted, freewheel iintlobo-enye zesantya, 700× amavili 32 kwaye namavili intsila 32-umngxuma, oku tyaba-bar sisombululo ibhayisekile sisipho ukusebenzisa ukubeka uncumo ebusweni kayihlo ngeli iKrismesi. (Iinkcukacha ...)
III.For Tech ibathwana
10.Pebble Steel Smart Watch iPhone kunye Device Android (Brushed Stainless)
Nale Sibrashe intsimbi engenasiphene iwotshi kuhle smart, utata wakho uya kuba nakho ukufunda imiyalezo yakhe, ukufikelela imeyile bakhe, Ukujonga ikhalenda uze uphendule iifowuni bakhe engenayo kunye nangoku ndiyazi ukuba ixesha ngalo naliphi na ixesha. Yenziwe yeeglasi corning igorila kwaselwandle ngumhlwa-intsimbi, akukho sizathu sokuba utata wakho uya balixabise nqaku isipho. (Iinkcukacha ...)
Iyafumaneka imibala emnyama, kulo notshi phezulu Neo Smartwatch yenziwe ukwenza imisebenzi ezimbini. Ngayo ngokugqibeleleyo akramnceleyo ngaphesheya esihlahleni utata wakho, uya kuba nako ukufumana isaziso kwangoko kwifowuni yakhe kunye nezinye izicelo, kufumana benze iminxeba. Unako amafuth esi sipho. (Iinkcukacha ...)
13.Samsung Galaxy Qaphela 8.0 (16GB, Mhlophe) 2013 imodeli
Sakunazisa 16 Memory GB, 8-intshi uboniso, 1.6GHz Quad Core yenkcukachaName, Android 4.1 Ijeli Bean OS and lemicroSD card slot, Samsung Galaxy Qaphela 8.0 kwaye ibukeka emahle,. Iyilelwe ukuba enze okuninzi kwemisebenzi. Unako uzenza inkwenkwe ezilungileyo utata bakhe ngokubanika utata wakho eli nqaku lweKrismesi. (Iinkcukacha ...)
14.UJuno Power JUNOJUMPR (LUHLAZA)– ubungakanani Pocket imoto battery jump Starter netshaja ephathwayo
Le nkqubo yenzelwe ukuba isetyenziswe ukuze anike ubomi ibe ibhetri ofileyo kanye phakathi kwezinye kwimizuzu. Nayo, utata wakho uya kuphinda nayo nayiphi na ingxaki xa efowuni yakhe, ipilisi, imoto, ikhamera okanye isithuthuthu ibhetri ithe. Kunye ezinobunzima 7 ukanti, utata wakho uya kuba nako ukwenza kunye naye. (Iinkcukacha ...)
15.Ucinezela HD Pro Webcam C920, 1080p Elephants Umboniso Ukumenyezelwa Recording
Ucinezela HD Pro Webcam C920 yenza iividiyo iminxeba kwiinkonzo ezahlukeneyo IM kuquka ilizwi kaGmail, Yahoo kuMthunywa Skype kunokwenzeka. Nayo, utata wakho uya kuba nako ukuthatha iifoto ezicacileyo ufake nabo kumaqonga eendaba zentlalo ezahlukeneyo ezifana Twitter, YouTube nakuFacebook. (Iinkcukacha ...)
IV.For le Debonair kunye nokuphala
16.Creed Silver Intaba Eau de Parfum isitshizi Men by Creed
Kunye Musk soft and entanjeni oliduna, le Khmer kuya utata wakho elimnandi okulungileyo imini yonke. Sisipho eya kwenza ukuba ukukhumbula ukuba nanini ufake kwaye ufumana nezincomo ukusuka ababathandayo nabahlobo kuquka utata wakho. (Iinkcukacha ...)
17.Valentino ngu Valentino for Men, Eau de Toilette Spray-
Oku kuya kuba isipho ebalaseleyo ukunikela utata yefashoni Buff zikukhathazayo ngenkangeleko yakhe. Emva squirting le Xhosa Khmer, uya kufumana kwingxaki ebantwini ukuba kuza ngeenxa zonke kuye. Ivumba ndihlale naye ubuncinane usuku lonke. (Iinkcukacha ...)
18.Iqhosha Tommy Hilfiger Men xa efuna Trim Fit blazer
eyenziwe 100% uboya, le suti enamaqhosha-amabini kuya utata wakho kufanelekile ogqibeleleyo kumenza khangela abangaphantsi kweminyaka yakhe. Isuti Ikwaziimpawu ofaka icala neepokotho kuzise. Uya kwenza isipho ngogqibeleleyo ukuze utata fashionista. (Iinkcukacha ...)
Nokuba utata yakho Nontombi kukutsheva ezomileyo lula okanye umanzi gel okanye amagwebu ukhuselo isikhumba wongezelela, Philips Norelco 1250X / 46 Shaver 8100 ndimnike egqibeleleyo amava icocwe ukugcina ubuso bakhe ngezela nezo umfana. (Iinkcukacha ...)
V.For bhanya Abathandi
20.System bose Solo TV zeSandi
Yenziwe ngeteknoloji entsha, le mveliso livelisa sandi esicacileyo ingxolo luncinane okanye akukho. Ingena ngokugqibeleleyo HDTV ngaphandle kokufuna nasiphi na isixhobo ezingaphezulu. Kunye iqhosha-4 kolawulo lobekelo, utata wakho uya kuba nako ukucwangcisa isandi zifile ukusuka oshukumayo yena ebukele njengoko uza kwanelisa kuye. (Iinkcukacha ...)
21.Sony BDV-N7100W 5.1 Channel 3D Blu-ray Disc Ekhaya Theatre System kunye Wireless yangasemva nooSomlomo ($549.00)
Esebenzisa isithethi isandi kunye nokufikelela iimovie blockbuster ngasemva eyakhelwe-ngaphakathi Wi-Fi kunye cingo Sony BDV-N7100W 5.1 channel 3D Blue -ray na Home theatre ukuba nawuphi umculo movie uya kukuvuyela ukufumana njengesipho. Inikezela lalila cinematic umxhelo. kwakhona utata wakho uya kuba nakho ukuba sinxulumene efowuni yakhe ukuba umsebenzisi smartphone. (Iinkcukacha ...)
Esi sisipho eya kwenza iinyembezi zovuyo mzuzu alufumana nto kuwe utata wakho ukuba ngaba ngokwenene bathandi bhanya. Ivela zonke iinkalo eziya kwenza ukuba kube lula kuye yakho ukubukela iimovie yakhe ayithandayo, TV shows kunye nokudlala imidlalo nje afuna. (Iinkcukacha ...)
23.Sony BDP-S580 Blu-ray idiskhi
Bexhobe eyakhelwe-ngaphakathi Wi-Fi, lo mzekelo Sony yokudlala idiskhi yenza kube lula kubasebenzisi ukubukela zombini Blu-ray iimovie idiskhi 3D movies Blu-ray kwi HD kunye 1080p HD Pheleleyo ngokulandelelana. Ibonisa ivideo elayishelwe eendaba isicelo ekude lefowuni Android, iPhone ne iPad. (Iinkcukacha ...)
Le modeli ngumabonwakude, utata wakho uya kuba nakho ukubukela iimovie yakhe ayithandayo yonke imifanekiso neefoto ekhangela wokwenene. smart kusebenziso ziquka intanethi umkhangeli Opera mini, Skype kunye Twitter. Ebonisa igalelo ezininzi eziquka 4 lwetshiphu, MHL kunye 3 i-USB, le mveliso inawo onke elithathwayo ukuba kuyivuyisa intliziyo zonke bathandi movie kuquka utata wakho. (Iinkcukacha ...)
25.The OontZ Ikona Ultra Portable Wireless Bluetooth uSomlomo
Nto ichukumisa audiophiles ezifana isandi umgangatho nomthamo ngcono. Oku kanye utata wakho uya kufumana ukuba umnikele eli nqaku njengesipho lweKrismesi. Nako ukungqinelana eziliqela iifowuni kuquka iPhone 6, iPhone 5, iPhone 6 kunye, amacwecwe, smartphones Samsung kunye kakhulu sonke ngabanye. (Iinkcukacha ...)
26.bose QuietComfort 15 Ingxolo Acoustic rhoxisa iiheadphone
Ngamandla aqulunqwe zixhotyiswe nge 2AAA nebhetri, le yoLungiso ikwazi ukudlala umculo ngenxa 35 iiyure enesandi ecacileyo kunye nesandi ncinci. Sisipho ukonwabisa intliziyo kayihlo ukuba yinto audiophile. (Iinkcukacha ...)
27.Bose SoundLink Mini Bluetooth uSomlomo
Ngumboniso ibhetri etshajekayo kunye 7 amandla ngelixa, le isithethi compact uya kwenza utata wakho ukudlala umculo ayithandayo ngoxa ukuhamba komsebenzi phambili audio. Ukuba yinto audiophile, ke kakhulu kusenokwenzeka ukuba kulixabisa ngakumbi kunayo nayiphi na enye into kuwe. (Iinkcukacha ...)
28.Celestron SkyMaster Giant 15 × 70 ibhayinotyhulasi kunye Tripod adaptha
Yintoni wayesabuka ngaphandle binocular? ngokuqinisekileyo, utata wakho uya ungathanda ukufumana imbono ecacileyo zonke emehlweni njengoko ngezikaTshiwo ize ijonge ezingqongileyo. Uya kumnceda ukuba babe namava zikhe kunomvuzo ngokubonelela kuye Celestron Sykmaster Giant 15 × 70 ibhayinotyhulasi kunye Tripod adaptha. Ukuba ufake eyeglass okanye hayi, kunye iimpawu ezifumaneka le mveliso, uya kukwazi ukuba imbono ecacileyo yonke into oyithandayo kuye. (Iinkcukacha ...)
29.Ezisemthethweni mvume Rambo I MC-RB1 Hunting imela Set 14-Inch Ngokubanzi
Ezizingelayo kwakunye ukukhenketha amaxesha kubeka ubani ngeengozi ezifana kuhlaselwa zasendle. Ngalo iseti imela kuzingela, utata wakho uya kuba nako ukukhusela agogotye uhlaselo olunjalo. Yenziwe blade intsimbi engenasiphene, le mveliso iza isiqinisekiso sobunyani. (Iinkcukacha ...)
VIII.For ngobungcibi nokupeyinta ongxolayo
30.Yophawu Fine Art Japanese I 30 × 47-Inch Canvas Wall Art
Le zobugcisa udonga isiqwenga yobugcisa ndijonge wadalwa odumileyo Philippe Sainte-Laudy. Yinto ekulungele-to-hang udonga art eya kwenza utata wakho usoloko nebhongo ngani. (Iinkcukacha ...)
31.Family Tree Wall yerenki
Akukho nto eza ikuchwayithise intliziyo kayihlo ngaphezu yomlibo udonga yobugcisa eya kwenza ukuba ukubonisa iifoto abantwana kunye naye naye encotsheni ezintathu okanye abo babazali bakhe njengendlela ukunxibelelanisa ukuba elidlulileyo. Le 107wx90h mnombo eludongeni zobugcisa eyenziwe kwi-US uya kwenza iqhinga kuye. (Iinkcukacha ...)
IX. Kuba Specialists DIY
32.Hitachi KC18DHL 18-Volt ilithiyam-Ion 3-Tool okuhliswayo Kit
Hitachi KC18DHL apho sisebenzisa 18 volt ilithiyam-Ion ngetshaja sisixhobo yonke utata DIY kuya ungathanda ukuba. Kunye Torque ye 460 kwi / lbs, utata wakho uya kuba nako ukubaqhelisa kwinani imiphezulu. labani- yayo iya kwenza kube lula ukuba utata wakho ukuba asebenze ngayo ngenxa eziliqela iiyure. (Iinkcukacha ...)
33.Stanley STMT73795 Mixed Isixhobo Set, 210-iqhekeza
Yenza utata wakho avuya ukuza Krisimesi imnike ibhokisi isixhobo equlathe ukuya 210 izixhobo kwakuthetha ngeenjongo ezahlukeneyo. Isixhobo esinjalo, utata wakho uya kuba noyolo kuba uya kuba nako ukumelana kakhulu kweeprojekthi yedwa. (Iinkcukacha ...)
Ndiyathemba ukuba umthande zonke izinto ezidweliswe Yintoni Ukuze Fumana uTata Yakho iKrismesi.
Fokanye Okuninzi izinto Gift kunye zafana Amazon Ndwendwela Links Ngasezantsi!!
Filed Under: christmas Izipho, Okufumaneka Tagged With: izipho lokuzalwa utata, izimvo christmas isipho kuba utata, christmas izipho kuba utata, christmas izipho kuba utata 2013, christmas izipho kuba utata 2016, christmas ngezimvo utata, christmas izimvo babekho utata, christmas ngokuphuhla utata, christmas ngokuphuhla utata esuka kwintombi, izipho kuhle ukuba utata, izimvo isipho utata christmas, izipho utata christmas, utata christmas izipho, izipho utata, utata izipho ngokuba christmas, utata izipho, isipho kuba utata lowo yonke, izimvo isipho kuba utata, izimvo isipho kuba utata christmas, izipho utata, izipho utata christmas, izipho utata ngokuba christmas, izipho njengabazali abo yonke, izipho ezilungileyo christmas kuba utata, izipho ezilungileyo utata, izimvo babekho utata, ngokuphuhla utata, ngokuphuhla utata lokuzalwa, ngokuphuhla utata christmas, izipho awodwa dad1, into yokuthenga utata ngokuba christmas, into ukufumana utata ngokuba christmas, into ukufumana utata ukuze quiz christmas, into ukufumana utata wam christmas, Yintoni Ukuze Fumana uTata Yakho iKrismesi, into ukufumana umama wakho christmas